Global Voices teny Malagasy » Ahoana Ny Eritreritr’ireo Mpiara-miasa Amin’ny Global Voices Momba ireo Voka-pifidianana Solombavambahoaka Tao Torkia? · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 13 Jona 2015 11:35 GMT 1	 · Mpanoratra Chris Rickleton Nandika Tantely
Sokajy: Tiorkia, Fahalalahàna miteny, Fifidianana, Fitantanam-pitondrana, Mediam-bahoaka, Politika, Tanora, Vehivavy sy Miralenta
Berlin, Alemàna. 6 Jona 2015 — vehivavy mpikatroka mitondra takelaka misy fangon'ny mpomba ny Kiorda sy ny elatra havia HDP, nandritra ny fihetsiketsehana manohitra ny governemanta. Sary avy tamin'i Thorsten Strasas. Demotix ID 7791641.
Ny Alahady alina, nilaza voka-pifidianana mahafinaritra ny kaomisiônan'ny fifidianana ao Torkia, izay noharahabain'ny maro ho fanombohan'ny farany ho an'ny antoko mpitàna ny fombandrazana, AKP (Antoko ho an'ny Rariny sy Fampandrosoana) izay nitondra ela teo amin'ny firenena.
Nametraka ny AKP tamin'ny salan'isa manodidina ny 41%-n'ny totalin'ny vato, ary ny tsy fahafahany manorina governemanta avy amin'ny antoko tokana, ireo valim-pifidianana. Ny HDP mpomba ny Kiorda, etsy andaniny nahazo teo amin'ny 13%-n'ny totalin'ny vato, nahadingana tsara ny 10% takiana ahafahana mametraka solontena ao amin'ny parliemanta, vao voalohany izao, raha toa ka tafiditra ao amin'ny parliemanta ihany koa ny Antoko Repoblikànan'ny Vahoaka CHP (25%) ary ny nasiônalista MHP (16.3%).
Ny fidiran'ny HDP ao anatin'ny parliemanta no tena tantara goavana tamin'ilay fifidianana. Namotika ny maha-maro an'isa ny AKP ao amin'ny mpanao lalàna io fandresena io, izay ho an'ireo mpifidy maro, nifandray tamin'ny fanoherana ny maha-laika, kolikoly, tsy fahampian'ny fandrosoan'ny miralenta, ny tsy fitoviana amin'ny lafiny sosialy, ary ny fahapotehan'ny fahalalahan'ny tontolon'ny media sy ny Aterineto. Raha toa ka niahiahy ny sasany hoe hihainohaino fotsiny eo amin'ilay sehatra lehiben'ny fifidianana ilay antoko kely, ary hiverina amin'ny politikan'ny fitiavan-tanindrazan'ny ‘raharaha Kiorda’ fotsiny indray, nahavita naka ireo mpifidy leo ny AKP ihany anefa izy, ary manana fahafahana tsara ahafahany mampiseho ny fahamatorany ny ho antoko nasiônaly mahavita miady ho an'ny fanovàna eo amin'ny firenena.
Nanontany sasantsasany tamin'ireo mpanoratra sy mpandika teny tsy tapaka ato aminy ny Global Voices, hoe inona no eritreriny ho maha zava-dehibe ilay fifidianana solombavambahoaka tamin'ny 7 Jona, ary mety ho aiza ny Torkia manomboka eto.
Erkan Saka :
Ny fahataperan'ny fitondran'ny antoko tokana notantanan'ny AKP no vokany lehibe indrindra.
Amin'ny tranga tena faran'izay ratsy indrindra, tsy hisy fitsanganana governemanta iaraha-mitantana, ary hisy fifidianana hatao mialohan'ny fotoana ka hahazo seza maro an'isa indray ny AKP ao amin'ireo andro voalohan'io Fahalavoana io. Na izany aza, hita ho mitotongana ny AKP ary na ny antoko Tiorka nasiônalista MHP aza mety tsy hanampy ny AKP haka indray ny fahefana. Mety tsy hahavotra ny AKP na ireo fifidianana atao mialoha ny fotoana aza.
Na simba tanteraka, na hiemotra ny nofinofin'i Erdogan hitondra amim-pahefana matanjaka kokoa. Mety mitovitovy amin'ny teo aloha.
Raha manohy ny politikany efa misy foana ny HDP, mety ho tafiditra ao amin'ny politikan'ny Tiorkia ihany ny hetsiky ny Kiorda, ary ho tonga antoko laika amin'ny elatra havia matanjaka sy malaza izy.
Mbola manohy manalokaloka an'i Erdogan ny fomba fiaina Gezi. Ny ankamaroan'ireo tanora Gezi mpikatroka mafana fo izay narahako maso teo aloha dia somary naka elanelana nihataka amin'ny hetsika Kiorda, satria ity farany dia somary naka elanelana tamin'ny Gezi Mpanohitra ihany koa. Fa nanapa-kevitra ny hanasazy an'i Erdogan tamin'ny fifidianana feno kajikajy ireo mpanohana ny Gezi.
Eo ankilany, nanomboka niaraka sy namolavola ny mpanohitra sôsialy avy amin'ireo vovonana maro ny HDP, tafiditra amin'izany ny mpikatroka Gezi. Raha manohy toy izany ny HDP, mety ho lasa fifanarahana maharitra ireo fanapaha-kevitra feno kajikajy avy amin'ny mpifidy ireo…
Arzu Geybullayeva :
Amin'ny maha vahiny ahy, tena tsapa ho toy ny fifidianana lehibe indrindra teo amin'ny tantaran'i Tiorkia io. Variana aho nahita hoe tena feno fientanentanana be ireo fifidianana ireo, teo amin'ny lafin'ny tahan'ny mpifidy sy teo amin'ny fifanakalozan-kevitra.
Manana fanantenana bebe kokoa noho ireo Tiorka namako aho tamin'iny fifidianana iny. Mieritreritra aho fa misy ireo antony vitsivitsy mahatonga izany. Ny iray amin'ireo dia, amiko, toa hita ho vitan'ny HDP ihany io raha jerena ny fihetsiketsehan'ny antoko. Ary araka ireo resadresaka henoko manodidina, toa betsaka ihany ireo safidy nanome ny fahatokisany ho an'ny HDP.
Ny rivotra niainana tamin'ireo fifidianana faobe tao amin'ny firenena, dia antony iray hafa maha-be fanantenana ahy ihany koa. Amin'ny maha avy amin'ny fitondrana tsy refesi-mandidy [Azerbaijan mpifanila vodirindrina] ahy, izay mbola tokony hanana fifidianana malalaka sy mifandanja, mainka fa ny fampielezan-kevitry ny antoko tokana, tsapako fa afaka ny tena hiova tsara ireo zavatra ao Torkia.
Ortac Oruc :
Afaka milaza aho fa iray amin'ireo fifidianana sarotra indrindra tao Tiorkia io, ary mety hoe izay aza ireo vahoaka vao nifidy voalohany tamin'ny tena safidiny manokana, tamim-pieritreretana ny rafitra parlemantera, nanisa tsara ny isan'ny toerana ary nametraka ho an-jorony ireo foto-keviny sy ireo hevitry ny fiarahamonina. Tsy mino aho hoe efa niseho tany aloha izany.
Nanao fampielezan-kevitra tena nahomby tokoa ny HDP; nasehon'izy ireo antsika fa mahalala izy ireo, mahafantatra tsara ary te-hanova ny zavatra namerana antsika nandritra izay folo taona lasa na mahery izay. Mbola misy fanantenana tsara ho an'ny fiovàna, mitovy tamin'ny nandritra ny fihetsiketsehana Gezi mihitsy. Ary Eny, nanome ny vatonay izahay mba hamaizana an'i Erdogan, nanome ny vatonay izahay tamin'ny hevitray manokana, ny fieritreretanay, ary ny nofinofy ho an'ny ho avy.
Tsy hanantena firy aloha aho ny amin'io resaka io. Nanana ireo nofinofiny ho an'ny ho avy ihany koa ireo olona nofidiantsika, nandritry ny fotoana tena ela. Manadino mora ny zavatra niainantsika isika ary tena mahatalanjona izany. Manadino isika anefa nisy ny tantara nasiaka  [miresaka ny fisintahan'ny Kiorda sy ny herisetra] tamin'ny voalohany ka nahatonga ny antsoina hoe HDP. Hain'ny AKP tsara ny fanaovana politika, ary vitan'izy ireo ny nanova ny fijerin'ny olon'i Tiorkia, saika mikasika ny zavatra rehetra mihitsy. Ankehitriny isika nifidy ho an'ny [HDP], tsy nijery ny lasany. Tsy zavatra ratsy akory io, fa ny làlana tena nety indrindra na izany aza . Ny mampalahelo dia ny hoe tsy voatery ho hadinon'ny HDP ny tantarany sy ny tanjony tamin'ny voalohany. Ary hiasa amin'ireny heviny ireny izy ireo, raha toa ka tokony hoe hanao fiaraha-miasa. Lasa mino ny hisian'ny fiovàna isika, ary araka izany dia lasa manana fironana ny ho voalefona ivoho. Raha mba afaka ny ho feno fanantenana ho an'ny ho avy mamirapiratra bebe kokoa mantsy aho momba io vokatra io.
Ahmet Sabanci :
Be fanantenana kokoa aho ary mino ny hoavy tsaratsara kokoa amin'ny ankapobeny momba ny HDP. Te-hanohy sahala amin'izao izy — fantatr'ilay antoko tsara fa tsy hanampy hanome vahaolana amin'ny ‘olan'ny Kiorda’ mihitsy ato ho ato (hatry ny taona 2006-07 faharahakeliny) ny firesahana fotsiny ny momba ny Kiorda. Amin'ireo voka-pifidianana ireo, nasehony tamin'ireo Kiorda sy Tiorka tsara izany, indrindra ho an'ny vahoakan'i Gezi. Fantatr'izy ireo fa miankina amin'ny tsy rariny ara-toekarena sy ara-tsosialy ny ankamaroan'ny olantsika, ary ankehitriny nanomboka nihaino azy ireo ny olona rehetra.
Amiko, io no fivakisana faharoa ho an'i Tiorkia, taorian'ny Gezi. Ary andraikitr'ireo mpikatroka mafana fo sy ireo vondrona mpanohitra ankehitriny ny miady mafy kokoa eto. Hisy ny fotoan-tsarotra ato ho ato — mety hoe mandritra ny roa taona — fa aorian'izay kosa, afaka ny hahavita zavatra betsaka eto isika.
Misy feo roa momba ny toe-draharahan'ny AKP. Araka ny nahitantsika azy hatreto, te-ho tonga masiaka izy ireo taorian'io valim-pifidianana io.
Nilaza izao ny Lefitry ny Praiminisitra, Yalçin Akdogan: “afaka manao sarimihetsika fotsiny aloha manomboka izao ny HDP amin'ny fizotry ny fampihavanana [any Kiorda atsinanan'i Tiorkia],” nilaza izy fa nanisy vanja miafina ny tena herin'ny fampihavanana eo amin'ny firenena ny fandresen'ny HDP: AKP.
Burhan Kuzu , mpanao politika iray hafa an'ny AKP, nanoratra tao amin'ny Twitter toy izao “nisafidy ny faharavàna tanteraka ireo vahoaka, fa tsy ny filaminana.”
Mampiasa fitenenana mitovy amin'izany ireo mpanao gazety maro mpomba ny AKP, milaza fa hahatonga krizy ara-toekarena ireo voka-pifidianana ireo. Matahotra ny vahoaka hoe mety hanao valifaty ny AKP noho ireo voka-pifidianana ireo.
Amiko manokana, faly tokoa aho hoe mitovy isa ny solombavambahoakan'ny HDP (na hoe +1 taorian'ny adihevtra) sy ny an'ny MHP nasionalista. Amin'ny fijerena fotsiny izay manome hafaliana ho ahy.
Ece Basay :
Raha jereko amin'ny ambangovangony ny zavatra rehetra — ary ataontsika hoe tsy hisy ny fifidianana mialoha ny fotoana — Hitako ho tena hanome fanantenana be ilay voka-pifidianana, noho ny antony maro. Ny antony voalohany sady lehibe indrindra dia ny nitombon'ny fahatsaràn'ny fisoloantena ao amin'io parlemanta io. Olona maro, tafiditra amin'izany ny tsy Silamo, ireo Kiorda, ary ireo vehivavy, no samy tafiditra avokoa ao amin'ny parlemanta, izay mampisy fanantenana ny hisian'ny politika feno fifanajàna, miasa ary mira lenta bebe kokoa. Raha lazaina ny fisoloantenan'ireo vehivavy, nitombo ho 18% ilay 14.3% teo aloha. Mbola tsy ampy izany, fa efa mba dingana lehibe tokoa. Mampitombo ny fanantenako ny amin'ny hoavin'ireo hetsika miaro ny zon'ireo vehivavy sy ny fitovian-jo amin'ity firenena ity ny fisian'ireo vehivavy izay fantatra tamin'ny asany nitaky ny fitovian-jo, toa an'i Filiz Kerestecioğlu  (HDP), Meral Danış Beştaş  (HDP) Hüda Kaya  (HDP) ary Leyla Şahin Usta  (AKP). Antenaina hoe taorian'izay 13 taona izay, mba mety hanomboka hisy zavatra hihatsara amin'izay ny momba ireo vehivavy.
Mety hitondra fiovàna amin'ny fifandraisana ankoatra ny ao amin'ny parlemanta mihitsy ny fiovàn'ny fitsinjaràm-pahefana. Ny media no iray amin'ireo taranja mba mety ho afaka hiaina indrindra amin'izay. Na hoe mbola eo ampelatanan'ireo mpanohana ny Antoko ho an'ny Rariny sy ny Fampandrosoana aza ny antsasak'io, farafaharatsiny amin'io voka-pifidianana io, mety hahazo fahafahana maneho ny heviny moramora ary amim-pahatokiana kokoa ireo media ambiny. Mety hanampy hamerina ny fahalalahana sy fangaraharàn'ny fanaovan-gazety io toe-draharaha io, izay tena zava-dehibe ilaina tokoa amin'ny demôkrasia.
Noho izany, amin'ny ankapobeny, maha-be fanantenana ilay voka-pifidianana. Ankehitriny, miankina amin'ireo antoko politika ny sisa.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2015/06/13/70917/
 Erkan Saka: https://globalvoicesonline.org/author/erkan-saka/
 Ortac Oruc: https://tr.globalvoicesonline.org/author/ortac-oruc/
 tantara nasiaka: http://en.wikipedia.org/wiki/Turkey–PKK_conflict
 Ahmet Sabanci: https://globalvoicesonline.org/author/ahmet-a-sabanci/
 Burhan Kuzu: https://twitter.com/burhankuzu?lang=en
 Ece Basay: https://globalvoicesonline.org/author/ece-basay/
 Filiz Kerestecioğlu: https://twitter.com/filizker
 Meral Danış Beştaş: https://twitter.com/meraldanis
 Hüda Kaya: https://www.facebook.com/HudaKaya.pa
 Leyla Şahin Usta: https://twitter.com/leylasahinusta